new orleans harrah ny casino parking
new orleans frantsay ampahefatry casino
new orleans poker fifaninanana fandaharam-potoana
tsara sy azo antoka indrindra an-tserasera filokana toerana
Na dia eo aza ny 14% mitombo, Wong dia midika fa ny asa tsy ara-dalàna tsy mety hampidi - "goavana ny loza mitatao ho an'ny filaminam-Makaô ny fiaraha-monina," na dia ny fianakaviana vao tsy ela akory izay namono mpiloka mety tsy mitovy hevitra misy casino akaiky clarksville tennessee.
Ny fitomboana, sy ny avo-ny mombamomba ny mamono olona, dia manao ny fampiharana ny lalàna ho lasa mavitrika kokoa amin'ny ady filokana mikasika ny heloka new orleans harrah ny casino parking. Afa-tsy ny iray ampahefany vita amin'ny taona 2019, ny maro dia efa mihoatra ny antsasaky new orleans frantsay ampahefatry casino.
Makaô misahana ny Fiarovana Wong Sio Chak milaza ny fanatsarana efa nahita ny isan'ny busts avy amin ' ny fiakaran hifantoka amin'ny asa, izay nitarika 71 olona efa voasambotra tamin'ny volana febroary taorian'ny izy ireo dia hita ho ao anatin'ny vondrona nanao findramam-bola sharking sy ny fakàna an-keriny new orleans poker fifaninanana fandaharam-potoana. Eo ireo dia ny tranga vao haingana ny mpiloka izay novonoina noho ny tsy fandoavana ny trosa. Makaô dia nanana ny sasany dia sarotra ny fitondrana eo ambany fanaraha-maso findramam-bola sharking ao an-tanàna. Makaô mbola hiezaka mba hanadio ny sary sy ny hanaisotra izay blotch fa afaka manome amin'ireo tanàna hilalaovana, ny ratsy ny anarany. Izany dia nitombo 14.1% ao an-toerana sy ny fampiharana ny lalàna dia fandraisana ny mahery fihetsika mba hiezaka mba hisorohana ny isa niakatra intsony. Na dia an-tanàna dia nanatri-maso ny fampihenana ny sasany mampiahiahy ara-bola ny asa, dia tsy afaka hamongorana azy rehetra, fa mbola miezaka.
Efa voasazy maro ny heloka bevava voarindra sendika amin'ity taona ity ary manana bebe kokoa drafitra eo amin'ny asa. Izy ireo dia nahitana ny fampindramam-bola tsy ara-dalàna, izay nitombo 37.3% ny toe-javatra 81 tsara sy azo antoka indrindra an-tserasera filokana toerana.